Maxaad Ka Baran Lahayd Faa'iidooyinka Condo | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Si si buuxda loo fahmo dhinacyadan sharciga ah, waxaa muhiim ah in la awoodo in lagu qeexo fikraddan qaab aasaasi ah oo cad, Kondhomiyamka waxaa lagu qeexaa inuu yahay hanti ay wadaagaan dhowr shaqsi, milkiileyaal ama heysato.
Hadda, guryo kala duwan iyo hanti maguurto ah ayaa ku hoos jirta xaaladdan oo loo yaqaanno is-kaashatada iyada oo ay sabab u tahay lahaanshaha kala duwan ee gurigaaga, qaar ka mid ah sababaha ugu badan ee soo noqnoqda ee ay u leeyihiin lahaanshahan kala duwan ee guri cayiman noqo dhaxal ka dhexeeya xubnaha qoyska sida caadiga ah walaalaha, guurka, ama ganacsiga ay wadaagaan lamaanayaasha.
Marka la wadaagayo guri, heshiisyada iyo gorgortanka ayaa badanaa la gaaraa oo dhisi kara xiriirka wadajirka ah ama wadajirka u dhexeeya shakhsiyaadka, mulkiilayaasha danta guud ee loo yaqaan guryaha is-kaashatada.
Dhamaadka hantida la wadaago waxaa badanaa loo yaqaan joojinta guryaha is-kaashatada, tani waxay tusinaysaa dhammaystirka tan, kala dirista hantidan hantideeda kala duwan.
Tusaale cad oo kani wuxuu noqon karaa kiiska furiinka, labaduba waxay noqdeen milkiileyaasha guryaha is-kaashatada inta lagu guda jiro guurkooda, laakiin midkood oo kaliya ayaa hayn doona hantida furiinka kadib, isaga oo kan kale siinaya tixgelin dhaqaale, taas oo inta badan ah qiimaha hanti.
Sida lagu sharaxay faahfaahin dheeraad ah, Dhimashada guryaha is-kaashatada waa mid faa iido badan oo ku habboon kiisaska ay ku jiraan hanti aan loo qaybin., sidii kiiskii hore, nolol lagu iibsaday guurka gudihiisa.
1 Maxay yihiin sababaha ugu badan ee keena dabar goynta?
1.1 Kondho joogto ah
2 Sidee baa u istaagida joojinta guryaha is-kaashatada ama wada lahaanshaha lahaanshaha?
3 Waa maxay waxa loo qaybsado?
3.1 Kondho qaybin ah
3.2 Is-kaashatada aan la kala qaybin karin
4 Maxaa dhacaya haddii heshiis la gaari waayo milkiileyaasha iska leh?
5 Suuragal ma tahay in la iibiyo dhismaha aan leeyahay?
6 Sidee loo fuliyaa dabargoynta guryaha is-kaashatada haddii ay jiraan wax amaah ah?
7 Dameynta guryaha is-kaashatada awgeed
8 Dareynta nidaamka hantida bulshada iyo baabi'inta milkiilaha guryaha is-kaashatada
9 Waa maxay canshuuraha laqaadayo marka la codsanayo dabar goynta guryaha is-kaashatada?
Maxay yihiin sababaha ugu badan ee keena dabar goynta?
Waa in la ogaado taas wax wada lahaanshuhu wuxuu kudhamaadaa gebi ahaanba marka waxa guud, kaas oo laga doodi doono goor dhow, kala daadato ama la bakhtiiyo.
Haddii, sabab sharci ah oo gaar ah, ay u sii socoto mid ka baxsan iibka; ama haddii wax wada lahaanshuhu ku dhaco xoolaha la dhaqdo, waxay la soo noqdaan xorriyadooda.
Wada-lahaanshaha ama is-kaashatada ayaa ku dhammaan kara qayb ahaan marka qofku helo hanti ay leeyihiin shakhsiyaad badan; markay cinwaanada oo dhami maraan; ama markay ku lumiso tanaasul sharci ah, xukun xukun ama dil
Kondho joogto ah
Haddaan gudaheena ka hadalno guryaha is-kaashatada caadiga ah, milkiile kastaa wuxuu xaq u leeyahay oo suurtagal u leeyahay inuu tan joojiyo markuu doono, markii aad codsaneysid nidaamka qeybinta waxa guud, tani macnaheedu waa qeybinta alaabtaan.
Nidaamkan hantida aan la kala qaybin karin sida guri uu shaqsi kasta milkiilaha ka ahaa wuxuu noqonayaa lacag u dhiganta ama xoogaa u dhiganta, Halka boqolleyda u dhiganta qof kasta oo iska leh guryaha is-kaashatada, hantida, ama lahaanshaha wadajirka ah loogu qaybin karo si caddaalad ah oo gebi ahaanba daacad ah.
Sidee baa u istaagida joojinta guryaha is-kaashatada ama wada lahaanshaha lahaanshaha?
Si hawshan loo bilaabo, waxaad u baahan tahay inaad saxeexdo qandaraas si guriga aad ka hadlayso uu yahay Jooji inaad noqoto hanti la wadaago oo loo gudbiyo kaliya hal milkiile, Qandaraaskani wuxuu qeexi doonaa dhammaan macluumaadka ku saabsan hantidan oo ka sii gudbi doonta wadaagisna yeelan doonta hal mulkiile.
Qandaraaskan sidoo kale waa inuu ku daraa kuwa yihiin milkiileyaasha asalka ah iyo midka iyaga ka mid ah u bixin doona qaybtooda xagga dhaqaalaha, Sidoo kale qiimaha lagu heshiiyey, qandaraaskan waa in loo qaataa nootaayo ama haddii ay dhacdo inuu wax ka qabanayo furiin ee uusan aheyn dhaxal, qandaraaskan waxaa lagu saxiixi karaa heshiiska sharci dejinta iyadoo la wadaago heshiis, kaas oo ay tahay in lagu daro dalbashada furiinka.
Waa maxay waxa loo qaybsado?
Asal ahaan tan macnaheedu waa haa labada dhinac midkoodna ma ogolaanin inuu codsado joojinta guryaha is-kaashatada markaa wuu samayn karaa codsiga ah Qeybinta waxa guud, meesha aad ka dalban karto kala dirista guryaha is-kaashatada.
Qeybintaan waxa guud ayaa la codsan karaa inta ay jiraan dhowr qof oo haysta hanti aan la qeybin karin, waxaa la siin karaa mid ka mid ah dadka haysta ama iibin kara oo u qeybin kara faa iidada,
Si aad u awoodo inaad fuliso dhammaan nidaamkan, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad go'aamiso astaamaha guryaha is-kaashatada, loo qaybin karo ama aan loo qaybin karin.
Kondho qaybin ah
Haddii guryaha is-kaashatada loo qaybiyo markaa nidaamkani wuu fududaan doonaa maadaama, maaddaama loo qaybin karo qaybo siman, mid kasta waxaa la siin doonaa qaybtiisa lahaanshaha.
Is-kaashatada aan la kala qaybin karin
Hadday tahay is-kaashatada lama qaybin karo markaa laba dariiqo ayaa loo qaadan karaa, sidii markii horaba loo soo jeediyey, ama is-kaashatada waa la iibin doonaa iyada oo loo qaybinaayo qaddarka lacageed ee ka soo baxa dhammaan milkiileyaasha, ama ikhtiyaarka kale ayaa ah in milkiilayaasheeda midkood uu noqdo mulkiilaha kaligiis, isagoo siinaya ama milkiileyaasha kale abaalmarinta dhaqaale ee qiimaha lahaanshahooda.
Haddii aan heshiis la gaadhin mulkiilayaasha markaa maxkamaddu waxay la wareegi kartaa xaraashka gurigan oo isla markaaba la sharixi doono,
Dhammaan talaabooyinkan waa in laga codsadaa maxkamad, si la mid ah qareen ayaa loo baahan doonaa si uu u fuliyo habraacyada una hago hawsha illaa dhammaystirkiisa.
Maxaa dhacaya haddii heshiis la gaari waayo milkiileyaasha iska leh?
Sida la sheegay, maxkamaddu waa inay ku qabataa xaraashka isla is-kaashatada isla maxkamadda dhexdeeda haddii mulkiileyaashu aysan heshiis ka gaari karin qeybsiga waxa guud, lacagta ku soo xaroota xaraashka la sheegay ayaa shaqsi ahaan loogu qeybinayaa milkiilayaasha.
Suuragal ma tahay in la iibiyo dhismaha aan leeyahay?
Jawaabta tan waa haa, haddii aysan daneyneynin qeybtaada guriga, ama haddii aysan rabin inay maraan dhammaan nidaamyadan sharci, waxaa jira ikhtiyaarka ah inaad ka iibiso lahaanshahaaga qof ama shirkad danaynaysa.
Sidee loo fuliyaa dabargoynta guryaha is-kaashatada haddii ay jiraan wax amaah ah?
Kiiskani waa mid aad u caan ah, tusaale ahaan tan waxay noqoneysaa markii guurka gudihiisa la go'aansado in lagu iibsado guri iyada oo loo marayo amaahda guryaha iyo waqtiga ka dib, ay doonayaan inay dalbadaan furiin iyo joojinta guryaha is-kaashatada.
Xaaladahaas waxaa lagu ogaan karaa in mid ka mid ah milkiileyaasha ayaa hantiya hantida oo dhan, laakiin si kasta oo uu midkood u ogolaado in mulkiyad la siiyo kan kale, deynta lama tirtirayoMarkaad saxeexdo joojinta guryaha is-kaashatada, lahaanshaha guriga waa la wareejinayaa laakiin deynta ayaa ku sii jiri doonta., si aad sidoo kale ujoojiso inaad ahaato deyn markaad wareejinaysid lahaanshaha, waxaa lagama maarmaan ah in bangigu wuxuu fasaxayaa amaah kale.
Deyntan, shakhsiga ka bixinaya qaybtiisa hantidu kuma yarayn doono moorgeejku, markaa oo keli ah ayaa heshiis guri oo cusub lagu saxeexi karaa magaca qofka hayn doona guriga iyo deynta gebi ahaanba.
Dameynta guryaha is-kaashatada awgeed
Waa wax soo noqnoqda oo soo noqnoqda in dhowr xubnood oo qoys ah, badiyaa walaalo wadaaga lahaanshaha guryo dhowr ah, iyo maadaama gurigu yahay hanti aan lakala sooci karin astaamo u gaar ah awgeed, halkaasoo qayb aan lagu hayn karin guryaha qaarkood iyo qaybta kale ee guryaha kale, waxaan u gudbeynaa baabi'inta guryaha is-kaashatada.
Dareynta nidaamka hantida bulshada iyo baabi'inta milkiilaha guryaha is-kaashatada
Aad bay muhiim u tahay in taa la ogaado Nidaamka dabar goynta guryaha is-kaashatada lama fulin karo haddii inta lagu guda jiro hawsha furitaanka la codsado in la nadiifiyo nidaamka hantida bulshadaTan iyo markii codsigan la tiriyey ayaa laga sameyn doonaa hantida laga dhex helay guurka gudihiisa waana loo qaybin doonaa labada shaqsi, joojinta is-kaashatada waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba lagu sameeyo hanaan kasta oo kale oo ah kala-soocista hantida furiinka ka dib.
Waa maxay canshuuraha laqaadayo marka la codsanayo dabar goynta guryaha is-kaashatada?
Sida kor ku xusan, fuliyaan nidaamka baabi'inta guryaha is-kaashatada Waxay noqotaa mid aad uga raqiisan la wareegida guri ama wareejinta guryaha is-kaashatada,
Canshuurta kaliya ee ay tahay in loo hogaansamo waa tan wareejinta canshuuraha iyo ficillada sharciyeed ee dukumiintiga ah Waa inta udhaxeysa 0.5% iyo 1% taas oo ku kaladuwan beelaha kala duwan ee ismaamula, dhanka kale, marka la iibinayo iibka canshuurta la bixinayo waa inta udhaxeysa 6% iyo 10%,
Markii la bixinayo bixinta cashuurtaan, waa in lagu xisaabtamo in markii la wada bakhtiiyo guryaha is-kaashatada, haddii qiimaha loo qoondeeyey qayb ka mid ah lahaanshuhu aanu ahayn qiimaha ay hadda ku fadhido, waa in loo hoggaansamo cashuurta dakhliga shaqsiyeed.
Sida iska cad, fulinta howshan way ka jaban tahay wax iibsiga iyo iibinta laakiin maaddaama ay tahay in ficil dadweyne la sameeyo oo la diiwaangeliyo, diiwaangelinta iyo kharashyada nootaayo waa in la daboolaa, qiimaha qaabeynta nidaamkani wuu ku kala duwanaan karaa iyadoo loo eegayo qiimaha guryaha is-kaashatada, Waa inaad sidoo kale shaqaaleeysid maareeye kaa caawin doona hawshan, oo noqon doonta hal maalgashi oo dheeri ah. Caadi ahaan lacag-bixintan waxaa sameyn doona qofka keligiis iska leh milkiilaha guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Baabi'inta Condo
Suuqa saamiyada Isbaanishka marka loo fiiriyo hoos u dhaca sanadkiiba
Mudnaanta si ay u maal gashadaan lacagtaada